TAFA-PIFIDIANANA : Jean Jacques Ratsihetison - José Andrianoelison -
AccueilRaharaham-pirenenaTAFA-PIFIDIANANA : Jean Jacques Ratsihetison – José Andrianoelison
17/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Masi-mandidy amin’ny taniny ny Malagasy
Foto-kevitra nijoroan’ ny kandidà laharana faha-6, Jean Jacques Ratsietison, hatrizay ny fialan’i Madagasikara ao anatin’ny MID na ny « marche inter bancaire de devis », izay lalan-tokana ahafahana mampakatra vetivety ao anaty 24 ora monja ny sandan’ny Ariary. Io fotokevitr’io, izay efa natolotry ny kandidà laharana faha- 6 ny fitondrana Tetezamita, ary nivadika ho volavolan-dalàna izay lany 80% teo anivon’ny CT sy ny CST, saingy noho ny tombontsoa manokan’ny hafa hoy i Jean Jacques Ratsihetison, dia tsy notanterahina izany, nefa tapitra ihany ny Tetezamita. Teo no nahatsapan’ny kandidà laharana fahenina, fa ny filatsahana hofidina ho filoham-pirenena ihany sisa no hany vahaolana, ahafahana manala ny Malagasy ao anatin’izao olana mianjady aminy izao. Marihina fa ny kandidà laharana fahenina dia efa nanao fanamby teny amin’ny HCC fa « iray volana monja aorian’ ny hitsanganan’ ny governemanta dia mampanantena anao aho, fa hiala ary efa nametraka taratasim-pialana mialoha teny amin’ny HCC, raha tsy tanteraka izao fampanantenana izao ». Ka noho izany dia manainga anao ny kandidà laharana faha-6 , Jean Jacques Ratsietison izay tohanan’ny FMI-Malagasy, izay mampanantena sahady fa iray volana aorian’ny fitsanganan’ny governemanta dia hidina ho antsasa-bidy ny solika sy ny fitaovam-piasana samihafa afarana avy any ivelany.
José Andrianoelison, na José Kely. Kandidà amin’ny fifidianana ho Filoham-pirenena 2018 ny tenany, ary mitana ny laharana faha-15 amin’ny bileta tokana.
Araka izany, maromaro ireo vina tafiditra, indrindra amin’ny programan’asany. Anisan’ny nasongadiny amin’izany ny eo amin’ny resaka fananan-tany. Izay indrindra no mahatonga azy milaza fa “Masi-mandidy amin’ny taniny ny Malagasy”. Ankoatra izay, tsy mety amin’ny eritreriny sy sainy ihany koa ny famikirana eo amin’ny Fitondrana, fa aminy dia rehefa mahavita ny fe-potoam-pitondrana dimy taona dia izay ihany.
Ankoatra izay, eo amin’ny resaka halatra harem-pirenena, notsindriany fa na mpitondra, izany hoe, na Filoham-pirenena, na mpikambana eo anivon’ny governemanta, sns, ka tratra nangalatra teto amin’ny firenena dia tsy maintsy mamerina izany. Etsy andaniny, nambarany ihany koa amin’ny fampanantenana fa tokony ho vita hatreo koa ny “Fanjakana Dadabe Noely”. Izany hoe, miara-miasa, ary samy mioty ny vokatra fa tsy hizarazara fahatany, sns.
Marihina fa tany Toamasina ny kandidà laharana faha-15 no nanokatra ny fampielezan-kevitra, ary nitohy teto Antananarivo izany, ary ny faran’ny herinandro teo ny tenany no nihaona tamin’ny mpomba azy tany Ambohimandroso.